Uyisebenzisa kanjani iWindowsPress kwiPantheon | Martech Zone
Uyisebenzisa kanjani iWindowsPress kwiPantheon
NgoLwesibini, Novemba 21, 2017 UAndrew Taylor
Iwebhusayithi yakho yenkampani yenye yezona zinto zibalulekileyo zeshishini lakho. Ixesha lokulayisha, ukubakho, kunye nokusebenza kunokuchaphazela ngokuthe ngqo umgca wakho ongezantsi. Ukuba indawo yakho sele iqhuba kwiWordPress- siyakubingelela! -Ulungile kwindlela yakho yokuhambisa amava angenamthungo kubasebenzisi bakho kwaye iqela lakho.
Ngelixa ukhetha i-CMS elungileyo linyathelo lokuqala elibalulekileyo ekwakheni amava amangalisayo edijithali. Ukukhetha umphathi olungileyo we-CMS kunokunyusa ukusebenza, ukuphucula ixesha lokusebenza, ukunciphisa ixesha lophuhliso, kunye nokubonelela ngenkxaso ebalulekileyo.
Ixabiso leWordPress kwiPantheon
I-Pantheon yi ukuphathwa kweWindowsPress iqonga elinikezela isantya kunye nokusebenza ekufuneka ujikile abasebenzisi kukukhokela. Ngokungafaniyo nabaninzi ababoneleli be-WordPress abasebenzisa iiseva okanye oomatshini ababonakalayo, iPantheon isebenza kwiziseko ezisekwe kwisikhongozeli. Iziqulatho zinezibonelelo ezininzi, kubandakanya ukubonelela ngokukhawuleza, ukubakho okuphezulu, ukukala okuthe tye, kunye nokusebenza okungcono.
Ukongeza kwiziseko zophuhliso, iziza zePheheon zinazo I-PHP 7 ngokungagqibekanga, ilawulwa simahla HTTPS, ukugcina i-caching epheleleyo, kunye ne CDN-Kuyimfuneko yokusebenza okuphezulu kwebhokisi. Ungayichazanga eyethu Olona hlobo luhamba kakuhle lomsebenzi ukuba abaphuhlisi bathande.
Le indibaniselwano yeqonga eliqinileyo eliliwa kunye nezixhobo ezilungiselelwe abayili besiza eseta iPantheon ngaphandle kokhuphiswano. Iqonga lilungiselelwe ukuqhuba iisayithi ze-WordPress kwinqanaba elikhethekileyo.
Ukuqala ngeWordPress kwiPantheon
Imodeli yamaxabiso ePantheon ikuvumela ukuba yenza iisayithi zebhokisi yesanti simahla-ukhetha kuphela isicwangciso kwaye uqalise ukuhlawula xa usongeza indawo yakho yesiko kwaye uya kuphila. Ukudala indawo entsha ye-WordPress kulula, khetha ngokulula iWindowsPress xa usenza indawo entsha.
Ngenye indlela unokukhetha fudusa indawo ekhoyo yeWordPress iye kwiPantheon. Isixhobo sokufuduka sihamba ngenkqubo yokufaka iplagi kwindawo yakho esele ikho, emva koko ukudluliselwa kwindawo yesanti kwiPantheon kwenzeka ngokuzenzekelayo.
Nokuba yeyiphi indlela ungazama ngokukhawuleza kwaye ngokulula iqonga, nokuba yindawo entsha ye-WordPress okanye enye yeendawo zakho ezikhoyo, simahla. Inkqubo ye- Isikhokelo sokuqala ngokukhawuleza sePantheon inamanyathelo aneenkcukacha ukuba ufuna ukuthatha indawo yonke indlela yokuhlala.
Emva kokuba unendawo yeWordPress kwiPantheon uneendlela ezimbini onokuthi usebenze ngazo. Indlela yokuqala, kwaye elula, kukuhlela indawo yakho yeWordPress ngokuthe ngqo kwiPantheon. Guqula imixholo, yongeza iiplagi ezintsha okanye uhlele iifayile nge-SFTP kunye ne-git. Nokuba usebenza kanjani lonke utshintsho lulandelwa kulawulo lwenguqulo. Ngeefayile kunye neenkcukacha zokugcina iifayile ezigcina umxholo wakho kwaye akukho nto inokukhathazeka ngayo.
Enye indlela yokusebenza kunye neWordPress kwiPantheon inzima ngakumbi kodwa ibhetyebhetye kwaye inamandla, ukuziqhelanisa nendlela okhetha ukusebenza ngayo. Ngendlela yokunceda abaphuhlisi baququzelele ukuhamba kwabo kunye nokudibanisa nezinye iinkonzo.
Izixhobo zamandla ezinje nge Terminus ukulawula iPantheon kwilayini yomyalelo okanye Quicksilver ukuphumeza amagwegwe eqonga ayafumaneka. Sikwanemizekelo ephambili, enje I-Terminus yakha izixhobo ze-plugin kwaye I-WordPress ePhambili kwiPantheon, Ukudibanisa indawo yokugcina izinto zangaphandle zeGit, ukudityaniswa okuqhubekayo, uMqambi, kunye novavanyo oluzenzekelayo ngePantheon yamaqela afuna ukuhamba komsebenzi okunzima kunye nokuzenzekelayo.
Yiya phambili wenze uMangaliso!
I-Pantheon inikeza iqonga elikhulu lokusingatha kunye nezixhobo zokukunceda ukulawula indawo yakho ye-WordPress kwaye uyigcine isebenza kakuhle. Kusimahla ukuzama ke ukuya phambili kwaye ugwebe ngokwakho.
Bhalisela iAkhawunti yePantheon
tags: Phuhlisoukusingathahambisa iWindowsPressoothixoyokupasa amagamaUkufuduka kwamagama
UAndrew uyakuthanda ukusebenza efanisa ukunceda iiarhente kunye nokubuyisela kuluntu lweWordPress. Njengomphuhlisi wewebhu wangaphambili, u-Andrew wachitha ixesha lakhe kwiiprojekthi ezinkulu zabathengi ezinje ngeeNethiwekhi ze-AMC, iFrito Lay, iNational Van Lines, kunye nokunye. Ngaphezulu kweminyaka eyi-8 yamava ophuhliso lwewebhu, egxile kwiWordPress, ligqala elinamava.